नेपाल आज | ०१२ देखिनै सीमामा चीनको दादागिरी, शत्ता जाने डरले राजा महेन्द्र वोलेनन् (भिडियो)
हुम्लाको नाम्खा गाउँपाकिला–६, स्थित लिमी उपत्यकाको लाप्चा भन्ने स्थानमा चीनले नेपाली भुमी मिचेको चर्चा चलिरहेका वेला नेपाल डेमोक्र्याट यूनियनका अध्यक्ष सिद्धार्थ गौतमले भने नेपालको भुमी मिचिने क्रम राजा महेन्द्रकै पालादेखी सुरु भएको र एक ठाउँमा मात्र नभएर पुर्वदेखि पश्चिमसम्म सवै ठाउँमा सीमा अतिक्रमण भएको दावी गरेका छन् ।
महेन्द्रले ०१७ सालमा जननिर्वाचित सरकार अपदस्थ गरेर राजनीतिक दलहरूमाथि प्रतिवन्ध लगाएपछि एकतन्त्रीय शासन चलाएका थिए। वढि नै महत्वाकांक्षी भएकाले उनमा आफैँले प्रत्यक्ष शासन चलाउने मोह जागेको थियो । २२ पुष ०१७ को ‘कु’मा भारतीय हस्तक्षेप र प्रभावबाट जोगाउने नाममा महेन्द्रले चीनको सहयोग लिएका थिए ।
चीनसँग नेपालको औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध राजा महेन्द्रकै शासनको शुरुमा १ अगष्ट १९५५ (२७ साउन २०१२ साल) वाट सुरु भएको हो । राजा महेन्द्रले १२ असार २०१८ मा चीनको पहिलो भ्रमण गरेका थिए। जुन भ्रमणको क्रममा नेपाल–चीनबीच सीमा सम्झौता र अरनिको राजमार्ग निर्माण गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो ।
यसपछि चीनले लगातार रुपमा नेपालको भुमीमाथि धावा वोलेको गौतमको दावी छ । नेपाल आजसँग कुराकानीका क्रममा उनले भने–‘महेन्द्रले निरंकुश शासन ब्यवस्था टिकाउन चीनको सहयोग लिएको पाईन्छ। त्यसको वदलामा हिमालपारी तिब्बतपटीको हजारौं–हजार हेक्टर जग्गा चीनले कब्जामा राखेको छ। नेपाल (महेन्द्र) ले सत्तासँग आफनो भुमीको सौदावाजी गरे।’
आफनो राजनीतिक ब्यालेन्स गर्न चीनले भुमी मिच्दा पनि उनले त्यसको वारेमा नेवोलको उनको भनाई छ। ‘चीनले पुर्वदेखी पश्चिमसम्म हेरक ठाउँमा सीमा मिचेको छ। मुस्ताङ, गोरखा, लामा वगर, हुम्ला, कञ्चनजंघा क्षेत्र सवै ठाउँमा अतिक्रमण भएको छ’ उनले थपे–‘१९५९ सम्म तिब्बतपटी नेपालको धेरै जग्गा थियो । धरै समय अगाडि कैलाशमान सरोवर पनि नेपालकै अधिनमा थियो। त्यो सवै गुम्यो। सीमामा हाम्रो सुरक्षा छैन, नेपालको साधनश्रोत पनि कम छ। वोर्डरमा पचासौं किलोमिटरसम्म गाउँ पनि छैन। उनीहरुले हाम्रो भुभाग उनीहरुलाई जहाँ सजिलो भयो त्यहाँ आफनो वनाउँदै र प्रयोग गर्दै आएका छन् । वोर्डरमा त्रासको वातावरण छ, त्यसैले मानिसहरु वोल्न पनि डराउँछन् । सरकारको उपस्थिती नै नभएपछि त्यो अवस्था आएको हो ।’
हुम्लामा भुमी मिचिएको विषयमा जनप्रतिनिधि ने वोल्न थालेको भन्दै उनले गोरखामा पनि सीमा मिचिएको कुरा मिडियामा आएको उनले वताए । ‘यो तथ्यमा आधारित छ। जनप्रतिनिधी र मिडियाले झुटो कुरा वोल्छन् भने त कस्को के लाग्छ ? तर, वोर्डरका जनता नै सीमा मिचिएको पुष्टि गर्ने आधार हुन । उनीहरुलाई त्यहाँको अवस्थितीको वारेमा जानकारी छ’– उनले भने।
२०१८ सालमा चीन भ्रमणका क्रममा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष माओत्सेतुङसँग राजा महेन्द्र र रानी रत्न ।
चीनसँग सहमति गरेरै सीमा स्तम्भ वनाईएपनि त्यति हुँदा हुँदै पनि नेपालले भुमी गुमाउनु भनेको दुःखदायी अवस्था भएको उनले वताए । ‘कसैका स्वार्थ होलान, कसैलाई डर होला। केही राजनीतिक लाभका कुरा पनि होलान’ उनी भन्छन्–‘अहिले वोडरका पिलरहरु नेपालको सहमति विना सार्दै हिड्न थालिएको छ। यो कुरा स्थानीय जनता वालिरहेका छन् । तर, सरकारले गम्भिरतापुर्वक लिएको छैन। यसको अनुसन्धान गर्नु पर्यो । सुरक्षाकर्मी पठाउने र जनताको सहयोग लिएर सिमाको रक्षा गर्नु पर्यो ।’
हुम्लाको लाप्चा र हिल्सामा सीमा मिचिएको कुरा त्यसै नआएको भन्दै उनले स्थानीयलाई जती भुमिको मायाँ अरुलाई नहुने दावी गरे । ‘उनीहरुले त्यो कुरा उठाईरहेका छन्, सरकारले किन त्यो विषयमा कुरा उठाई रहेको छैन?’ उनले भने–‘ओली (केपी शर्मा ओली) को सरकार नालायक र चीनको पिठ्ठु सरकार हो। तेत्रो लाखौं हेक्टर भुमी मिचिएको छ, जनता कराई रहेका छन्। तर, परराष्ट्र मन्त्री सीमा मिचिएको छैन भन्छन् । चाईनाको गुणगान गाउँछन्।’
चीनको दादागिरीका कारण पहिला नेपालमा रहेका कतिपय गाउँ अहिले चाईनामा पुगेको गौतमले वताए । ‘कतिपय गाउँ पहिला नेपालका थिए, अहिले हेर्दा त चाईनापटी पो गईसकेको छ’ उनले भने–‘हुन त चाईना हाम्रो छिमेकी त होईन। १९५९ अगाडि हाम्रो छिमेकी तिब्बत हो। तिब्बत सँगै हाम्रो वार (लडाई) पनि भएको छ। ब्यापार पनि थियो। सांस्कृतिक सम्वन्ध÷रोटी–वेटीको सम्वन्ध थियो र छदैछ। भिसा र पासपोर्टको अवस्था थिएन। नेपालले तिब्बतवाट विशेष अधिकार पनि पाएको थियो। कालान्तरमा राजनीतिक मजवुरीको फाईदा लिएर ति सन्धीहरुलाई खारेज गरियो र नेपाललाई केही पैसा दिन थालियो। त्यो गर्नु उपयुक्त थिएन। सिमा सम्झौता अथवा तिब्बतसँग भएका सम्झौता नेपालको पक्षमा थिए। त्यसको पुनरावलोकन गर्नुपर्छ। राष्ट्रको हित तेसैमा छ।’
उनी अगाडि भन्छन्– लोभलालचमा चीनसँग गरिएका सम्झौता रद्द गर्नुपर्छ । अहिले चीनसँगको हरेक सिमामा हाम्रो समस्यै छ। त्यसलाई वैज्ञानिक ढंगले समाधान गर्नुपर्छ। तिब्बत हुँदा कुनै समस्या थिएन। चीनले तिब्बतमाथि कब्जा गरेपछि नेपालको सीमामा पनि समस्या आयो। वस्ती नै नभएको र पहुँच नपुगेकाले वर्षौवर्ष त्यो कुरा वाहिर आएन। तर, भर्खर मिडिया र जनप्रतिनिधिहरुले त्यो कुरा उठाउन थालेका छन् ।
नेपाली भुमीका चीनको झन्डा गाड्ने, चीनको दादागिरी विरुद्ध वोल्नेलाई मिसाईल हान्ने धम्की लगाएका विषयमा गौतमले चीनलाई कडा चेतावनी पनि दिए । ‘यो सवैको रिजल्ट चिनले पाउँछ, दिन आउँछन। हामी विर नेपालीहरु पहिला पनि चीनसँग लडाई लडेका छौं। अव पनि आफनो देशको भुभाग, सभ्यता, संस्कृति वचाउन फेरी पनि लड्नु पर्छ भने हामी तयार छौं। मिसाईलसँग हामी डराउँदैनौं’– उनले भने।
चीनको प्रभाव÷कम्युनिष्ट प्रभाव वढेपछि नेपालको सभ्यता, संस्कृति, भाषा, स्वतन्त्रता, मानव अधिकारलगायत हरेक क्षेत्रमा अतिक्रमण भईरहेको वताएका उनले चिनद्वारा पालित÷पोसित कम्युनिष्टहरुले अहिले पनि चीनकै पक्षमा गुणगान गाईरहेको उनले दावी गरे । ‘चीनले पालेका पुत्र (कम्युनिष्ट) हरु नेपालको काम गरिरहेका छैनन् । यत्रो वोर्डर मिच्दा, यत्रो नेपाललाई नोक्सान हुँदा, नेपालीको भविष्यमाथि खेलवाड हुँदा पनि आफनो दाई आफनो वाउ (चीन) को विरुद्धमा नेपालका कम्युनिष्टहरु वोल्दैनन्’ उनले भने–‘खै त नेपालका कम्युनिष्टले कुरा उठाएको ? यो कुरा उठाउनु पर्दैन। मानवअधिकार हनन् भईरहेको छ। हाम्रो उत्तरी समामा जोमसोमसम्म चीनका आर्मीहरु आएर वोर्डरमा घुम्छन्। नेपाली सुरक्षाकर्मीलाई वास्ता गर्दैनन्। ड्रेस लगाएर हतियारसहित आएर नेपालीलाई आतंकित गरेर फर्कन्छन्। तर, सरकारले त्यस विषयमा कुरा पनि उठाउँदैन।’
चाईनाले नेपाली कम्युनिष्टहरुलाई सहयोग÷संरक्षण गरेर नेपाली स्वाभीमानमाथि आक्रमण गरेको उनले वताए । नेपालका कम्युनिष्टहरु नेपालमा जन्मे, नेपालमा खान्छन्। नागरिक्ता नेपालको छ। तर, वफादारी उताको गर्छन। माओत्सेतुङ, माक्र्स, लेनिन प्रति उनीहरु वफादार छन् । देश भक्ति यस्तो हुन्छ– खाने यताको, गाउने उताको ? यीनीहरु राष्ट्रवादी होईन, यी पाखण्डवादी हुन। यीनिहरु दुष्ट हुन । भ्रम सिृजना गरेर नेपालीको भावनामाथि खेलवाड गरेर आफनो फाईदा लिईरहेका छन् ।
नेपाल–चीन सीमामा दखिएको विवाद र नेपालमा वढिरहेको चीनियाँ प्रभाव तथा असरका वारेमा नेपाल आजका लागि प्रस्तोता माधव गुरागाईले नेपाल डेमोक्र्याट यूनियनका अध्यक्ष सिद्धार्थ गौतमसँग गरेको कुराकानी हेर्न तलको लिंकमा क्लिक गर्नुहोस।
जमिन कब्जा नेपाली भुमीमा झण्डा सिमा विवाद हुम्लाको लिमी